Indlela ukupheka isitshalo seqanda zokupheka
Ama-eggplants asekujwayele ukujwayele etafuleni. Zingafakwa ekheniwe, ziphekwe, zengeziwe kuma-saladi, zifakiwe. Sinikeza izitsha ezimbalwa ezilula kusuka kuma-eggplant.
I-Appetizer kusuka isitshalo seqanda.
Udinga ukuthatha ama-eggplants ukuwageza bese uwasika zibe tincetu kanye ne-rind. Ngaphansi kwebhodlela, uthele amafutha bese uphelela kancane emafutheni. Bese ubeka iklabishi eqoshiwe ebhodweni elisha, uthele amanzi amancane bese ubhala kuze kube sezingeni eliphansi. Khona-ke, ekugcineni, engeza izinongo, usawoti, unamathisela omncane we-utamatisi, i-spoonful of ukhilimu omuncu. Utamatisi unamathele ungathathwa esikhundleni samatamatisi akheniwe noma ahlanzekile. Khonza lokhu okudla njengesidlo esihlukile. Ngokuhlanganiswa neklabishi ama-aubergines athole ukunambitheka okufana nokunambitheka kwezinhlanzi. Inhlanganisela ethakazelisayo kakhulu. Zama.
Imifino igwetshwe ngeqanda.
Isitsha esisodwa se-blue. Masithathe ama-eggplants ambalwa, uwageze futhi uwageze nge tincetu bese uwafaka epanini lokuthosa. On amaqanda amafutha ka gazinga ekushiseni okuphezulu. Siphinde sengeze ipulazi elimnandi laseBulgaria, sibe yi-cubes no-tomato owodwa. Yonke imifino kufanele ikhishwe kuze kuphekwe. Esikhathini esiningi esitholakalayo, ekugcineni sinezela, sifake igalikhi, ama-lobules ambalwa bese uvuselela konke. Izinhlamvu ezimbalwa ushizi kusukela phezulu ukufakwa. Vala umlilo bese uvale i-pan yokuthosa emaminithini ambalwa nge-lid ukuze i-cheese iyancibilika. Sisebenza ngokuqondile epanini lokuthosa.
Isitshalo esiyinkimbinkimbi sesitshalo seqanda nama-courgettes.
Ingasetshenziswa njengendwangu yecala ukudoba noma inyama, ungasakaza ngesinkwa bese uyisebenzisa njenge-caviar.
Thatha ama-aergergine amabili aphakathi nendawo ne-1 zucchini ephakathi. Siwasika zibe cubes, kuye ngokuthi yikuphi isidlo esiyidingayo ukupheka, uma caviar, kanti ezincane, uma for ukuhlobisa yemifino, ke ezinkulu. Sifaka emgodini ovuthayo ngaphandle kwamafutha. Ngaphandle kwamafutha, udinga ukoma ukuze i-zucchini ingahlali kakhulu, ukuze ungayitholi isobho. Amafutha angcono ukwengeza ngaleso sikhathi, lapho imifino imisa ukunikeza ijusi.
Emva kokungeza amafutha, engeza u-anyanisi omkhulu, oqoshiwe, ama-cubes afanayo, ngesayizi, njengemifino. Pepper nosawoti ukunambitha. Ungangeza ama-greener. Isidlo kuze kuphekwe. Lesi sidlo sizonikeza i-apple i-piquancy ekhethekile.
Caviar isitshalo seqanda.
Kungasetshenziswa njengesidlo esibandayo noma esishisayo, noma ungavala amathini nge-caviar ebusika.
Izithako: isitshalo seqanda 3 kilogram, i-bell pepper 300 amagremu, anyanisi amagremu angama 300, 300 amagremu utamatisi, iparsley, coriander noma imifino ye-basil, ama-clove angu-12-14, i-pepper, ushukela ukunambitha.
Ukulungiselela. Geza isitshalo seqanda, uthathe izingcezu ezimbili, ufake i-baking sheet bese ubeka amaqanda okutshala isitshalo seqanda ngamafutha omifino. Kuhhavini, bhaka amahora angu-25 ekushiseni kwama-degree angu-230-250. Ama-eggplant abhaka kancane futhi asuse esikhumbeni. Inyama ama-eggplants ngommese. Faka ikhasi u-anyanisi uphinde uthinte kahle. Pepper ukugeza, ukususa imbewu futhi uthathe cubes amancane.
Hlanganisa i-cuticle kusuka kumatamatisi bese uwabheka ku-grater enkulu. Hlanganisa amafutha emifino emgodini osigqinsiwe.
Beka u-anyanisi ebhotela bese ufaka u-anyanisi amaminithi amabili. Engeza pepper, gazinga imizuzu engu-5-7.
Bese ufaka u-anyanisi nopelepele ku-anyanisi nopelepele, hlanganisa konke bese upheka ekushiseni okuphansi, uvuselela imizuzu emihlanu.
Engeza isitshalo seqanda sesitshalo seqanda, uvuselele futhi udilize, uvuselele ngezinye izikhathi imizuzu engu-7-8.
I-garlic ihlanzwa, idlula i-garlic. Geza imifino, bese usika kahle. Engeza i-Garlic kuya isitshalo seqanda
usawoti, pepper, imifino, ushukela omncane. Futhi bhala imizuzu engu-5-7.
Ukushisa kwe-Caviar kufakwa izimbiza ezinamanzi futhi zimboze ngamabhodlela anenzalo. Amabhange ane caviar afaka epanini ngamanzi afudumele, ulethe ngamanzi abilayo futhi abilayo imizuzu engu-10-15 imbiza engamaminithi amahlanu. Amabhange aqoqa bese egoqa kahle ngaphambi kokupholisa phansi. Hlala endaweni epholile.
Ukupheka for izifundo okumnandi yesibili
I-Baltic Cheese Soup
Okroshka on ubhiya
Ukupheka kokudla okumnandi futhi okunempilo
Pilaf nge omisiwe
Ukupheka kwezitsha okumnandi nezithengekayo zeholide
Lungisa isaladi lesiGreki. Ukupheka nezincomo
Incazelo yemfihlo yezikhumbuzo zakho ezilethwa uhambo
Ukudla okukhona lapho i-iodine ikhona
Uma ubuhlobo bakho nendoda abuyikukhula
I-Trendy Fashion Trends 2014
Izimbali endlini nguFeng Shui
Gqoka futhi ulahlekelwe isisindo!
Ungashintsha kanjani indlu ngaphakathi endlini ngosizo lwezinto ezingenakuzithoba?
Konke owafuna ukwazi nge-asthma ezinganeni
Amangqamu ama-muffin nge-chocolate
Izipho ezithakazelisayo zoNyaka Omusha
Imibono enemfashini emafasiteleni okuhlobisa
Ukupheka kwezitsha ezilungiselelwe kusuka eel
Shish kebab kuhhavini embizeni
Izinzuzo kanye nokulimala kwama-soya